हिमश्रृंखला, सुर्योदय र सुर्यास्तको अलौकिक दृश्य अवलोकनका लागि यात्रा सन्दकपुरकाे !::mirmireonline.com
नेपालको सुदूर पूर्वको इलाम १ नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लामध्ये एक एशियाको माझमा चिन र भारतको बिचमा हिमालको काखमा रहको सुन्दर हरियाली पहाडी जिल्ला हो । राज्यको पुनःसंरचनाले इलाम जिल्लालाई १० स्थानीय तहमा विभाजित गरेको छ । इलामको ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये सन्दकपुर गाउँपालिका पर्यटनको दृश्टिले सबैभन्दा अब्बल र उत्कृष्ठ गन्तव्यस्थल हो ।
दक्षिणमा माईटारबेसीदेखि उत्तरमा हिउँ तुसारो फुल्ने सन्दकपुरको चुचुरोसम्म पूर्वमा आलेभञ्ज्याङ्ग देखि पश्चिममा थाक्लेभञ्ज्याङ्गसम्मको चार सीमानाभित्र समेटिएको प्राकृतिक भु–बनोट, वहुमुल्य जडिबुटी दुलर्भ वन्यजन्तु, र पुतलि, जैविक विविधताले सम्पन्न, विभिन्न जातजातिको फरक फरक भाष सस्कृति लोभैलाग्दो रहनसहन रितिरिवाज,मनोरम प्राकृतिक छटा र कृषिमा आधारित लगनसिल जीवनशैलीले सन्दकपुर गाउँपालिका साच्चिकै सिंघारिएको छ ।
समुन्द्र सतहबाट ९ सय देखि तीन हजार ६ सय ३६ मिटर उचाईसम्म फैलिएको सन्दकपुर गाउँपालिकाको नामकरण विश्वमै प्रख्यात पर्यटकीस्थल सन्दकपुर डाँडाबाट सापटि लिएको हो । प्राचिन शासक लेप्चा जातिको भाषा सन्दक्फु नामबाट अपभ्रम्स भई सन्दकपुर नामाकरण भएको हो । लेप्चा भाषामा सन्दक्फुको अर्थ बहुमुल्य जडिबुटी बिख्मा भन्ने बुझिन्छ ।
भारतीय पर्यटन नक्साको उत्कृष्ट १ नम्बरमा राखिएको सन्दकपुर सन्दक्फुबाट पनि चिनिन्छ । प्राकृतिक रमणियता सास्कृतिक विविधता, भौगोलिक विषमतायूक्त हावापानी र विविध जातिय संस्कृति हेर्न वर्षेने हजारौ पर्यटक सन्दकपुर गाउँपालिका क्षेत्रका विभिन्न पर्यटकीयस्थलमा आउने गरेका छन् ।
सिंहलीला र महाभारत पर्वतश्रृंखलाबाट उत्पत्र दर्जनौ नदीला प्रणाली, विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत माईपोखरी रामसार, सिमसार क्षेत्र, लोपोन्मुख थुप्रै वन्यजन्तु, वनजंगलभरी हुलका हुल चराका बथान, वनस्पति, हिमश्रङ्खला, छाँगा छहरा र यहाँका पौरखि किसानहरुले गरेका कृषि उत्पादन तथा पशुपालन व्यवसाय सन्दकपुर गाउँपालिको आकर्षणका केन्द्र हुन् ।
टावर झै ठडिएका अग्ला डाँडा र थुम्का थुम्कीबाट देखिने सुर्योदय र सुर्यास्तको अलौकिक दृश्य लोपउन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डा हाब्रे गाउँपिच्छे भेटिने पुराना गुम्बा मठमन्दिर तथा ढुङ्गाका देविस्थान लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहाँसिक सास्कृतिक सम्पदाहरु सन्दकपुर गाउँपालिकाको पर्यटनको थप आकर्षणहरु हुन् ।
१२ रै महिना न धेरै गर्मि न धेरै जाडो नेचरल एयर कन्डिसन हावापानी क्षणभरमा छोपिने र क्षणभरमा उघ्रिने बादुलहीको दरबार बिचैबाट एक तमासले मन्द गतिमा सुसाएर बगिरहने माईखोला अनी प्रत्येक गाउँमा होम स्टेको न्यानो आतिथ्यसत्कारबाट पर्यटहरु प्रफुल्लित हुँदै आएका छन् । सन्दकपुर गाउँपालिका पुग्न झापाको चारआलिदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडि मेची राजमार्गबाट उकालिदै सुनमाईदेखि भिर पहरा र नागबेली झै घुमाउरो बाटो छिचोल्दै कन्याम, फिक्कल, माईखोला हुँदै इलाम सदरमुकाम पुगिन्छ ।
इलाम बजारमा नेपालमा पहिलोपटक रोपण र प्रशोधन गरिएको चिया कमानको अवलोकन र इलाम नगरपालिकाको बिब्ल्याँटे धारापानी, जसबिरेदेखि चाँपगैरी पुगेपछि सन्दकपुर गाउँपालिको यात्रा शुरु हुन्छ । चाँपगैरीमा रहेको सानो पोखरीको अवलोकनपछि हामी रामसार सुचिमा सचिकृत प्रख्यात माईपोखरी तर्फ लम्कन्छौ ।
सदरमुकाम इलामबाट १३ किलोमिटर यात्रामा पुगिने माईपोखरी क्षेत्र सन् २००८ मा विश्व रामसार सुचीमा सुचिकृत गरीएपछि माइपोखरीले विश्वव्यापी पहिचान बनाएको हो ।
२ हजार १ सय २१ मिटरको उचाइमा अवस्थित २ हेक्टर जलासयसँगै १२ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको माईपोखरीमा सुनगोहोरो, लालिगुराँस, सुनाखरी, जडीबुटी, रैथाने माछा, उभयचर, सरिसृप र स्तनधारी प्राणिको अवलोकन गर्ने असंख्य पर्यटक वर्षेनी आउने गरेका छन् । माईपोखरीको दर्शनपछि तीन किलोमिटर उत्तरको यात्रा गर्दा पुगिन्छ देउराली बजार । सन्दकपुर गाउँपालिकाको केन्द्रिय कार्यालय रहेको देउराली बजार क्षेत्र सहिद भुमिका नामले समेत परिचत छ ।
तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सात खाल्डेमा सन्दकपुर १ का तुला बहादूर राई डाकमान राई, तेज बहादुर राई, जीतबहादुर राई, बल बहादुर गुरुङ्ग, लाखमान राई र खड्गबहादुर राईको विभत्स हत्या भएको थियो । पार्क वरिपरि अहिले फूलबारी, बगैंचा, चौतारी र बीचमा सहिद स्तम्भ राख्ने योजना रहेको छ ।
शोकलाई शक्तिमा बदल्दै, पहाड पल्टाउने ‘माउन्टेन म्यान’ यानकी डम्बरसिंह सुनुवारलाई देउराली बजारबाट डेढ किलोमिटर ठाडो उकालो यात्रापछि मौलिक चित्राले बुनेको सानो झुपडिमा भेटिन्छ । आँखाको सामुन्ने गोली लागेर रत्ताम्मे भई ढलेका सन्तानलाई जीवन्त तुल्याउँन ६ दशक अघिबाट चट्टान काट्न थालेका सुनुवारको घरपुग्दा लाग्छ हामी कुनै पुरातात्विकस्थलमा छौँ । मुक्तिसेनाका कमाण्डर सुवर्णशमसेर नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक योद्धा र सुरक्षा फौजबिच २०१८ साल माघ २ को भिडन्तमा डम्बरसिंहका १२ बर्षीय छोरा डिकबहादुर र डेढ बर्षीया छोरी ओममायालाई सुरक्षाफौजबाट बत्तिएर आएको बमले आँखै अगाडि क्षतबिक्षत बनाएको थियो ।
उनै सन्तान गुमाउनुको पीडालाई मनमा संगाल्न नसकेका डम्बरसिंहले अन्ततः ठूल ठूला ढुङ्गाहरु फोरेर मृत नावालक सन्तानको आकृति कुँद्न थाले । सुनुवारले घरपुग्ने निर्माण गरेको सुन्दर बाटो छ, जलकुण्ड छ, ढुंगे चौतारो ,मन्दिर लगायत अनौठो आकृतिले अहिले सन्दकपुर गाउँपालिका पुग्ने जो कोहिलाई तानेको छ । बुकि फुल्ने रुखो डाँडोमा रहेको सुनुवारको घर पर्यटक र राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको अध्ययन केन्द्र बन्दै गएको छ ।
प्राकृतिक सुन्दरता, हिमश्रीङ्खला, जैविक विविधता, सूर्योदय र सुर्यास्त अवलोकन गर्न सन्दकपुर गाउँपालिकामा कुनै कृतिम टावरको आवश्यकता पर्दैन । इलामकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सन्दकपुर, छिन्तापु, कालपोखरी, कैयाकट्टा, जौबारी, टप्पु, माबुथाम, हाँगेथाम जस्ता अग्ला अग्ला डाँडा थुम्काहरु जहाँबाट जता फर्केर हरेपनि धित नमर्ने मन नअघाउने सधै हेरिरहु, यतै बसिरहु लाग्ने आहा, कल्पना बाहिरको सुन्दरता । समुन्द्र सतहदेखि ३ हजार ६ सय ३६ मिटरको उचाइ रहेको सन्दकपुर नेपालको प्रमुख पर्यटकीयस्थल हो । भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने सन्दकपुर पर्यटन क्षेत्र भारतीय पर्यटन नक्सामा नम्बर १ पदमार्गमा राखिएको छ । र भारततीरबाट बर्षेनी ५० हजार भन्दा बढी पर्यटकहरु सन्दकपुर आउने गरको छन् ।
सन्दकपुर नेपाल भारत भुटानका ६० भन्दा बढी हिमाललाई कुम जोडिएझै १ सय ८० डिग्रीको सोझो सतहमा अंगालो हालेजस्तै आँखा अगाडी अवलोकन गरिने दक्षिण एसियाकै एक मात्र ठाउँ हो । सूर्योदय, सूर्यास्त अनेकौ प्रजातिमा फुल्ने लालिगुराँस हेरेर विश्वभरका पर्यटक आनन्द लिने गरेका छन् । सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण सन्दकपुर नेपालको सबैभन्दा बढी एकैठाउँबाट सगरमाथा, कंचनजङ्गा, मकालु पाथिभरा, कुम्भकर्ण लगायत हिमाललाई नजिकबाट नियाल्ने उत्तम गन्तव्य हो सन्दकपुर । छिनछिमा बदलिरहने मौसम र आँखै अगाडी देखिने हिमश्रृंखलाको दृश्यले सन्दकपुर डाँडामा पाइला टेक्दा पर्यटकलाई धर्तिमै स्वर्गीय आनन्द दिलाउँछ ।
यहाँ हिउँ परेको बेलामा हिउँ खेल्ने पर्यटकहरुको संख्या बढ्दो छ । इलामको चार खोलामध्ये पवित्र माई नदीको मुहान रहेकाले सन्दकपूरमा विश्वभरका श्रद्धालु भक्तजनले पुजा गर्दै आएका छन् । सन्दकपुरको डाँडाबाट सुर्योदय र सुर्यास्तको अलौकिक दृश्य अनि इलाम झापा र पश्चिम बंगालका अधिकासं गाउँबस्तिहरु हत्केलामा राखेर हेरिरहु जस्तो लाग्छ । बंगालको खाडिबाट बिहान झिसमिसेमै उदाउने कलिलो झुल्केघामको सबैभन्दा राम्रो दृश्य इलामको सन्दकपुरबाट मात्रै देखिन्छ । त्यही पहिलो घामको लालिमा पारिपट्टिको हिमालहरुमा टल्किदा आहा उचाई चुम्नुको मज्जा कत्तिहो कति ।
समुद्री सतहबाट तीन हजार दूई सय मिटरमा रहेको छिन्टापु जैविक विविधता तथा प्रकृतिले सिंघाएरीको अर्को उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थल हो । वसन्त ऋतुमा डाँडा पाखाभरि राताम्ये फुल्ने लालिगुराँस अनि छिन्तापुको काखैमा रहेको पोखरीहरुमा कंचनजङ्गा कुम्र्भकर्ण हिमालको दृश्यले पर्यटहरुको मनै वहलाउँछ । छिन्तापु आसपासमा सास्कृतिक महत्व रहेका तालपोखरी, फुस्रेपोखरी, छिन्तापु पोखरी लगायतका दर्जनौ पोखरीहरुले अझ मन प्रफुल्लित बनाउँछ ।
फागुन, चैत र बैशाखमा ढकमक्क फुल्ने चाँप गुराँस र सुनाखरीले पर्यटकलाई फेरि अकपटक छिन्तापु आउँआउँ बनाउँछ । छिन्टापु जाँदा बाटोमा पर्ने माईमझुवा गाउँका होमस्टे र ग्रामीण होटलहरुमा लोकल कुखुराको सुप, सिस्नो र कोदोको ढिडोको स्वादिलो खाना र न्यानो आतिथ्य सत्कारले कसको मन नलोभ्भिएला र । सन्दकपुर गाउँपालिकाको अर्को प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो माबुथाम डाँडा । प्राकृतिक, जैविक विविधताको दृश्यावलोकन र लोपउन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डा हाब्रेको बासस्थल रहेको माबुथाम क्षेत्र बुहुमुल्य प्राकृतिक जडिबुटीको अध्यय स्थल पनि हो ।
नजिकै पर्ने बौद्ध धर्मावलम्बिहरुको साधना केन्द्र डुख्याङ गुम्बा, रमिते ढुङ्गा, बालागुरु गुफा, लालबास पोखरी र विश्वकै लोपउन्मुख वन्यजन्तु रेडपाण्डा पाइने दोबाटे क्षेत्रले माबुथाम पुग्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । गाउँले जिवन्त रहनसहन र सास्कृतिक सम्पदाको अध्ययन गर्दै माबुथामबाट अघि बढ्दा नेपाल र भारत दूबैतीरबाट सन्दकपुर भ्रमणका आउने पर्यटकको संगमस्थल, हो कालपोखरी र बिखेञ्ज्याङ्ग । त्यहाँ पुगेपछि पर्यटकीय सिजनमा सन्दकपुर पुग्न लम्किरहेको हुलका हुल पर्यटकको लावलस्कर ताँति देख्न सकिन्छ ।
कालपोखरी नजिकै रहेको लालबास सीमसार क्षेत्र र त्यहाँ अनेकौँ प्रजातिको लालीगुराँस, सुनाखरी फुल र चराहरुको चिरबिर आवाजले पर्यटकलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । जंगलकै बिचमा ठुलो ढुङ्गामा गौतम वृद्धको स्तुतीगान कुदिएको शिलालेख पनि देख्न सकिन्छ ।
प्रकृति,सस्कृति, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरुको अध्ययन अनुसन्धान तथा अवलोकनको अर्को प्रख्यात ठाउँ हो सन्दकपुर वडा न ५ जमुनाको हाँगेथाम डाँडा । पुर्वमा हाँगेथाम जंगलमा मात्रै पाइने विश्वमै दूलर्भ स्पाइब्नी ब्याब्लर अर्थात काँडेभ्याकुर चराको अध्ययन अनुसन्धान गर्न वर्षेनी पक्षिविदहरु आउने गरेका छन् । रेडपाण्डा हाब्रे, थार, ध्वाँसे चितुवा, कालोभालु, चरिबाघ, राजपखिं, ठकठके लगायत जिवजन्तु र पक्षि पाइने हाँगेथाम क्षेत्रमा अमेरिकि वन्यजन्तु विज्ञ ब्राइम विलियमले डेढ दशक अघि सात महिना लामो रेडपाण्डाको गहिरो अध्ययन गरेका थिए ।
विगतमा मानविय अतिक्रमणका कारण सुकेर गएका हाँगेथाम पोखरी लगायत अन्य ससना पोखरीहरुलाई पनि अहिले संरक्षण अभियान थालिएको छ । हाँगेथाम क्षेत्र पछिल्लो दिनमा बनभोज स्थल पिकनिक स्पट पनि बन्दै गएको छ । हाँगेथाम डाँडैमा झण्डै दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहाँसिक दोमाङ्ग छोलिङ बौद्ध गुम्बा छ । गुम्बामा ल्होसार पर्व र अन्य धार्मिक तिथिहरुमा धार्मिक अनुस्टान हुँदै आएका छन् । हाँगेथामबाट नजिकैको सीमा क्षेत्रका पर्यटकीयस्थलहरु कैयाकट्टा, गैरिबास, जौबारी तुम्लिङ्ग, मेघमा पनि सहजै १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिन्छ ।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने स सना बजारमा रहेका यी पर्यटकीयस्थलमा खान बस्नको लागि राम्रो प्रबन्ध छ । चित्रै चित्राले बनेका कलात्मक काठेघरहरुमा बस्दै स्थानीय सेर्पा, तामाङ, राई र गुरुङ्ग जातीको परम्परागत संस्कृति र सहसहनमा लुटपुटिदै अनि नेपाली गाउँघरहरु दृश्यअवलोकन गर्न बाह्य मुलकका धेरै पर्यटकहरु वर्षेनी यहाँ आउने गरेका छन् ।
सीमा क्षेत्रको जौवारीले भने अहिले अर्को पहिचान स्थापित गराएको छ । नेपाली किसानलाई आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले नेपाल सरकारले दुई वटा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क र आलुबालि तथा बागबानि विकास केन्द्र जौबारीमा पुनः स्थापना गरेपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानको अध्ययन अवलोकन केन्द्र बनेको छ ।
लामो समय सरकारी उदासिनताले उजाड र खण्डहर बनेको आठ हजार ४ सय ४५ रोपनीमा फैलिएको आलु विकास क्षेत्र हाल आएर हराभरा बन्दै छ । हुस्सु र भुई कुहिरो लुकामारि खेल्ने जौबारी र तालपोखरी क्षेत्र अहिले कृषि बैज्ञानिकहरु र कृषि मजदुरहरुको ज्ञान सिप र पसिना बगाउने कर्मथलो बन्दै गएको छ ।
सन्दकपुर वडा न १ मा रहेको टप्पु प्राकृतिक रमणिताले भरिएको ठाउँ हो । लोपउन्मुख जीव वन्यजन्तु वनस्पिति १२ महिना फरक फरक मौसममा फुल्ने जंगली फुल र जडिबुटी पाइने टप्पु क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रुपमा विकास गर्न सन्दकपुर गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ ।
भिर पहराबाट सुस्केरा हाल्दै हामफल्दै बग्ने सयौँ झरनाहरुको राजधानी पनि हो सन्दकपुर गाउँपालिका । २ सय ८० फिट अग्लो माईमझुवाकाृ टोड्के झर्ना नेपालको दोस्रो अग्लो झरना हो ।
टोड्के झरनाको फेदीमा पुगेपछि झरनाको पानीमा देखिने सप्तरङ्गि इन्द्रेणिको मनमोहक दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई त्यही बसिरहु हेरिरहुँ जस्तो आनन्दित बनाउँछ । सन्दकपुर वडा नम्बर २ मा रहेको टोड्के झर्नाको रोमाञ्चित दृश्य माबुको सायङ्बा गहिरिगाउँबाट पनि उत्तिकै मञ्जाले अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
जलाधारको खानी सन्दकपुर गाउँपालिका क्षेत्रका धप्पर झरना र पाहा खोला झरना अर्को पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो । माईमझुवामा रहेको झप्पर झरना र पहरा नै फोफेर निस्किएको झै देखिने जमुना मझुवाको पाहा खोला झरनाको दृश्यावलोकन गर्न अहिले पर्यटकहरु आउन थालेका छन् । पाहा खोला झरनाको छवैको कपुर डाँडामा अर्को साहसिक पर्यटन रक क्लाम्बिङ्गको पनि अनन्त संम्भावना रहेको छ । जमुनाकै नुनथला क्षेत्र पुतलीहरु पाइने प्रख्यात ठाउँ हो ।
सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं ५ को जमुना इङ्लाको चोयाटार जंगल विश्वमै दूर्लभ रेडपाण्डा हाब्रे पाइने चर्चित ठाउँ हो । रेडपाण्डाको अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकनमा वर्षेनी वन्यजन्तु विद र सयौँ पर्यटकहरु अहिले चोयाटर वनमा आउने गरेका छन् । रेडपाण्डा अध्ययनकै लागि अर्को उत्तिकै प्रख्यात ठाउँहरु माबुको दोबाटे जंगल र कैयाकट्टा क्षेत्र पनि हो ।
रेडपाण्डा पर्यटन प्रवद्र्धनले क्रमस ति क्षेत्रहरु अहिले पर्यटन मैत्री गाउँहरु बन्दै गएका छन् । यहाँ खोलिएका होमस्टे ग्रामिण होटेलहरु पर्यटकहरुलाई सेवा र सुविधा त दिएकै छ यस बाहेक मनेग्य आर्थिक आर्जन गर्दै आएका छन् ।
सन्दकपुर गाउँपालिकाको लेकाली क्षेत्रमा लोपउन्मुख गिद्ध, लामपुछ्रे मुनाल, काँडे भ्याकुर र तल्लो बेसी क्षेत्रमा कालिज, धनेसबाज, गरुड कोकले लगायत दर्जनौ प्रजातीका चराचुरुङ्गीहरु पाइन्छ ।
भारतपट्टि सिंहलिला संरक्षित क्षेत्र भएकाले सन्दकपुर गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरु आरक्षण क्षेत्रबाट सहजै आउजाउ र बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका दर्जनौ सास्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरु धार्मिक पर्यटनका दृश्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । वडा नम्बर ४ माबुमा रहेको डुग्डे छेम्पो नामगेलिङ्ग साधना केन्द्र लामा गुरु उत्पादन गर्ने पुर्वकै प्रशिद्ध धार्मिक साधना केन्द्र हो । तीन वर्ष तीन महिना तीन दिन कठोर धार्मिक उपासनाका साथ राखिने साधना केन्द्रमा नेपाल र भारतका लामा गुरुहरु बर्षौदेखि परम्परागत गुफा बस्दै आएका छन् । साधना केन्द्रसँगै रहेको उर्गेन तेङ्गेलिङ गुम्बा सेर्पा जातिहरुको जायि संस्कृति रितिरिवाज र रहनसहन अध्ययन गर्न सकिने अर्को धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो । ७ दशक अघि निर्माण भएको ऐतिहासिक एवम् प्राचिन यो गुम्बामा लामा शिक्षाको प्रारम्भिक कक्षा अध्ययनपछि लामा विद्यार्थीलाई देशभरका अन्य गुम्बामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पठाइन्छ ।
गुरुङ्ग तमु जातिको आस्थाको केन्द्र काथोक नमनाङ् होसेल छोलिङ्ग गुम्बा अर्को धार्मिक गन्तव्यस्थल हो । हाल निर्माणाधिन रहेको उक्त गुम्बा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका साथै गुरुङ्ग जातिय संग्राहालयका रुपमा विकास गराउने लक्ष्य लिइएको छ । माबुमै अवस्थित ङ्यूर थुक्तेन दोर्जे छोलिङ्ग गुम्बा मगर जातिको पवित्र धार्मिक सम्पदा हो । उत्त गुम्बामा मगर जातिले हरेक महिना दशमि र बिषेश तिथि पर्वहरुमा पुजा अर्चना गर्दै आएका छन् ।
चट्टानमा प्रकृति द्धरानै कुदिएका कलाकृतिमा रमाउन सकिने माबुको सत्य सिद्धदेविस्थान र सिवालय क्षेत्र पर्यटक लागि अर्को गन्तव्यस्थल हुन् । सिद्धदेवीस्थान र सिवालय क्षेत्रमा वर्षेनी महाशिवरात्रि, वालाचतुर्दशि, रामनहमिमा श्रद्धालु भक्तजनले पुजा अर्चना गर्दै आएका छन् ।
सन्दकपुर ५ को जमुनामा रहेको किराँत हाङ्साहाङ्ग मन्दिर लिम्बु समुदायको अर्को सास्कृतिक सम्पदा हो । किराँत धार्मिकस्थलको रुपमा विकास भएको यो मन्दिरमा लिम्बु जातिय संस्कृतिको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । यस्तै वडा नम्बर ३ सुलुबुङ्ग टारीमा रहेको सुतुलुङ्ग ढुङ्गा ऐतिहासिक सास्कृतिक सम्पदा हो ।
भौगोलिक विषमता, प्राकृतिक रमणियता र जैविक विविधतासँगै विभिन्न जाति जनजातिको मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज र धर्म संस्कृतिले सन्दकपुर गाउँपालिकामा सास्कृतिक पर्यटकिय गाउँको रुपमा समेत विकास हुँदै आएको छ । यहाँका गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, सुनुवार , मगर, सेर्पा, तामाङ्ग, बाम्हण, क्षेत्री, कामी दमाई र अल्पसंख्यक थामि समुदायले मनाउने आ आफ्नो चाडपर्व र मौलिक सस्कृति यहाँका सास्कृतिक गहना हुन् ।
आदिवासी जनजातिको मौलिक रहनसहन, जातिय भेषभुषा र हरेक चाडपर्वहरुमा नाचिने जातिय झाँकिले पनि सास्कृतिक रौनक थपेको छ । प्रकृति पुजक किराँत राई जातिले आफ्नो भेषभुषमा सजिएर नाच्ने उधौली, उभौली र साकेला चण्डि नाच कत्ति गौरवलाग्दो जातिय संस्कृति हो ?
आफ्नो भेषभुषा सस्कृति र परम्परामा आधारित रहेर नाचिने सुनुवार जातिको स्यादर चण्डी नाच यहाँको अर्को आकर्षक संस्कृति हो । चण्डि नाच बैशाखे र मंसिरे पूर्णिमा पर्वका दिन सुनुवार समुदाय भेला भई नाच्ने गरेका छन् । पुर्खाहरुले परापूर्वकालमा गरिएका कामको स्मरण गर्दै गाइने र नाचिने हुर्रा नाच मगर जातिको जातिय सास्कृतिक नृत्य हो । कृषि खेतीमा गरिने कामको चर्चा गर्दै नाचिने मगर जातीको हुर्रा नाच सन्दकपुर पुग्ने पर्यटकको आकर्षण हुँदै आएको छ ।
गुरुङ्ग जाति बसोबास रहेको यहाँ उनीहरुको रहनसहन, सास्कृतिक सम्पदासँगै आफ्नै भेषभुषामा नाचिने नृत्य ग्रामीण पर्यटनको माध्यम हो । वौद्यमार्गी गुरुङ्ग जातिको नृत्यमा भने अहिले पश्चिमि आधुनिकता झल्कदै गएको देखिन्छ । परम्परागत बाजाको सट्टा आधुनिक संगितमा गुरुङ्ग जातिका युवायुवतीले पर्यटकलाई मायाप्रेमका गाथा आधारित संगित र नृत्यले लोभ्याउने गरेका छन् ।
सन्दकपुर गाउँपालिकामा बस्ने बाम्हण र क्षेत्री समुदायको सस्कृति पर्यटक आकर्षणको अर्को माध्यम हो । हिन्दु सनातन समुदायले गर्ने १६ संस्कारमा आधारित सस्कृतिक नृत्य यहाँ बसोबास गर्ने बाम्हण र क्षेत्री समुदायले संरक्षण गरेका हुन् । चेलीले माइतीलाई बिदाईको हात हल्लाउँदा गरिने अभिनयमा आधारित संगिनी नाच अहिले पनि जिवन्त रहेको पाइन्छ । लिम्बु जातिले बिहे भोज भतेर र मेला पर्वहरुमा नाचिने धाननाच, पालमनाच, च्याब्रुङ्ग ढोलनाच सन्दकपुर गाउँपालिका जिवन्त राखेका छन् ।
गाउँघरमा आउने लिम्बु जातिले अझै पाहुनाको स्वागत र बिदाईमा आफ्नै भेषभुषामा सजिएर गाइने र नाचिने धाननाच, खुसियालीमा नाँचिने पालम र ढोलनाच सास्कृतिक पर्यटनको एउटा उदाहरण हो । लिम्बुजातिको बिहे भोज भतेरहरुमा अहिलेपछि यी नाचहरु देख्न सकिन्छ ।
औषधियजन्य गुण रहेका बहुमुल्य जडिबुटीको व्यवसायीक खेती हुँदै आएको सन्दकपुर गाउँपालिकालाई पूर्वी पहाडको जडिबुटी र बनस्पतिको राजधानी भन्दा अतियुत्ति नहोला । यस क्षेत्रका लेकाली किसानहरुले आफ्ना घरघुर्यानदेखि बाँझो पाखा पखेरुहरुमा सतुवा, मजिटो, इन्द्रेणि,लौठ सल्ला, सुनाखरी, चिराइतो, पाँचऔले, कुड्की, ओख्खे आलु चिम्फिङ्ग लगायतका थुपै्र प्रजातीका जडिबुटीहरुको व्यवसायीक खेती गर्दै आएका छन् ।
आलु, अलैची, अम्लिसो, गाईबस्तुको दूध लगायत पछिल्लो दिनमा किबीको व्यवसायीक खेतीले सन्दकपुर गाउँपालिकाको कृषि पर्यटन फस्टाउँदै गएको छ । सन्दकपुर वडा नं ५ को जौबारी र तालपोखरी क्षेत्रमा विगत ५ वर्ष अघि पुनःस्थापना गरिएको नार्क र बागबानि केन्द्रले उन्नत जातका कृषि उपजको बिउ बिक्रि वितरण शुरु गरेपछि यहाँबाट बिउ लैजाने तथा अध्ययन अनुसंन्धान र कृषि अवलोकन भ्रमणमा आउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
जिल्लामा पहिलो पटक कबि फलको व्यवसायीक उत्पादन थालिएको सन्दकपुरमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने दृश्टिले किबि जोन घोषणा भएपछि देशविदेशका उद्यमी किसानको मन अहिले सन्दकपुर गाउँपालिका र किबिफल तिर तानिएको छ । यहाँका उद्यमसिल किसानहरुको पसिनाले रुखो डाँडाडाँडामा रहरलाग्दा चियाका बुटाहरु मौलाएका छन् । मकै र धान फल्ने घर घुरानदेखि खेतबारीमा अलैची र किबि खेती विस्तारले कृषि प्रवद्र्धन भएको छ । उन्नत नश्लको व्यवसायीक गाईभैसी पालनले गाउँगाउँमा खोलीका असंख्य डेरी र चीज उद्योगहरुबाट उत्पादित गुणस्तरीय चिज र छुर्पीले अहिले अन्तराष्टिय बजार छाएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा सबै मिलि गरे के हुँदैन भन्ने एउटा जवलन्त उदाहरण जमुनाको चन्द्रपाल थेवे सिमसार ढाप पोखरी पनि हो । धेरै अघि धानको बिऊ राख्ने गरिएको सिमसार ढापपोखरी पछिल्लो दिनमा यो क्षेत्रका किसानले धान खेती छाडेर वैकल्पिक खेती अपनाएपछि ढाप पोखरी उपयोग विहिन थियो ।
विगत ४ वर्षअघि स्थानीय जमुनाबासीको अगुवाई र सक्रियतामा उपयोगविहन ढापलाई पोखरी बनाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यले थालिएको ढापपोखरी निर्माण अभियानपछि अहिले दिनहुँ पर्यटकहरु घुमेर आनन्द दिने गरेका छन् । प्राकृतिक पर्यटकीय उपजले सिंघारिएको इलाममा ढापपोखरी मानव निर्मित पर्यटकीय उपज हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ढापपोखरीमा अहिले डुङ्गा सयरसँगै रामनहमिको बेला सास्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।
सन्दकपुर गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पछिल्लो दिनमा धेरै काम भएका छन् । प्रकृतिले मुट्ठि फुकाएर उपाहार दिएको सन्दकपुर गाउँपालिकाको हरेक पर्यटकीयस्थलहरु पुग्ने पदमार्ग, ग्रामीण सडक विस्तार र संभावना हेरी पर्यटन पूर्वाधारका अरु काम तिब्र रुपमा भएका छन् । विविध जातजाति, भाषाभाषि र धर्मावलम्विहरुको मिश्रित बसोबास रहेको सन्दकपुर गाउँपालिकालाई पूर्वकै अब्बल सास्कृतिक पर्यटकीय नमुना गाउँ बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै देखि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सास्कृतिक गाउँको अवधारणा अगाडी ल्याई त्यसैअनुरुप काम थालिएको छ ।
हिमालका हिउँसँगै सधैँभरी खेलिरहुँ झै मनै लोम्याउने दर्जनौ सन्दुर हिमचुचुरा , निश्चिल पानी भित्रै डबुल्कि मारिरहौँ झै सजिएका दर्जर्नौ प्राकृतिक पोखरीहरु,अग्लाअग्ला डाँडाहरुमा बादलुको घुम्टोभित्र लुकामारि खेल्दै मन्द झोकामा बहने हावासँग सुसेलिदैँ, वनपाखको वन्यजन्तुसँग लुकामारी खेल्दै र चराहरुको चिरबिर आवाजमा रम्दै रमाउँदै तपाईपनि सन्दकपुर गाउँबासिको न्यानो पाहुना आत्मिय सत्कारमा लुटपुटिन तपाई पनि एक पटक पक्कै आउने हो की ।